Inona no ataoko raha mahita saka eo am-baravaran'ny tranoko aho? Midika | Noti saka
Efa nitranga taminao ve fa raha vao tonga any an-trano ianao dia nihaona amina saka, na hoe nijery fahitalavitra mangingina ianao ary tampoka teo dia nanomboka nandre Meow teo akaiky teo ianao ary rehefa nosokafanao ny varavarana dia nahita volom-borona ianao? Raha izany dia azo antoka fa manana fisalasalana ianao ny amin'izay hatao amin'izany, sa tsy izany?
Mety ho very, nilaozana, na noana io. Ho hitantsika eo qué ataovy raha sendra saka eo am-baravaran'ny tranoko aho.
Eto amin'izao tontolo izao iainantsika, ary noho ny fomba fiainantsika, mihamaro hatrany ny saka voatery mitady ny sakafony eny an-dalambe. Heverina matetika fa ireo biby ireo dia efa mahalala teknika fihazana hatramin'ny andro voalohany nahaterahany ary noho izany dia tsy tokony ho sarotra ho azy ireo ny mahita sakafo, saingy tsy izany no izy.
Tsy misy teraka mahalala. Mba hianarana dia mila ny reniny hampianatra azy ireo izy ireo, saingy tsy mora koa izany: raha saka izay niara-nonina tamin'ny olombelona foana ny reny ary niafara tamin'ny famoizana azy, dia hanana fahasahiranana amin'ny fampianarana azy ireo izy, ka nosarain-jaza ny zanany. tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mianatra samirery.
Raisina an-tsaina izany, ny hanoanana dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga anao mahita saka eo am-baravarana. Rehefa avy nitady ireo fako izy ary tsy nahita na inona na inona, dia hisafidy ny hanontany ny olombelona izy. Na izany aza, tsy izy irery.
Antony iray hafa dia izany ny saka diaé mitady ny reniny, na ny mifamadika amin'izany. Ao amin'ny tontolon'ny arabe, izay misy loza maro dia maro, ny fianakaviana saka dia manana olana be amin'ny fandrosoana. Raha maheno saka na saka zaza ianao, dia azo inoana fa mitady ny zanany na ny reniny, mitaky ny sainao. Amin'ny tranga ratsy indrindra dia mety mangataka fanampiana maika ianao rehefa avy resy.
Ary raha ririnina, ary any amin'ny faritra mangatsiaka ianao, afaka miondrika eo anoloan'ny varavaranao mba hahitanao fialofana. Eny, mangatsiaka koa ny saka, ary raha tsy mahita toerana hiarovan-tena izy ireo dia mety maty. Noho izany, raha tsy tianao ny hanana azy ao an-trano, fa te-hanao zavatra hanampiana azy ianao dia avelao hiditra ao amin'ny garazy izy io raha mbola madio izy io ary tsy tratra ny akora simika-, na manao trano ho azy ary mahazaka lamba firakotra.
Ahoana no hisarihana saka mania
1 Inona no hatao hanampiana azy ireo?
2 Inona no dikan'ny hoe rehefa miseho eo am-baravaranao ny saka?
2.1 Saka very
2.2 Saka dia
2.3 Saka afaka
3 Antony mety hisehoan'ny saka eo am-baravaranao
4 Dingana tokony horaisina rehefa misy saka miseho eo am-baravaranao
4.1 Biby sa arabe?
4.2 Zahao ireo famantarana fa manana tompony izy
4.3 Ahoana raha tsy hitanao ny tompony?
4.4 Omeo sakafo sy fialofana
4.5 Zahao ny aretina ary vaksio ao amin'ny toeram-pitsaboana izy
4.6 Omano ny tranonao
Inona no hatao hanampiana azy ireo?
Afaka manao zavatra maromaro ianao, dia ny:
Tazomy izany: raha saka na saka toa misambotra ny fiaraha-monina, izany hoe manantona anao mitady safosafo dia azonao tazomina ao anaty trano. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny ampitso, rehefa tsara kokoa izy, dia entinao any amin'ny mpitsabo biby raha toa ka manana microchip izy, izay midika fa manana fianakaviana izy. Raha tsy manana ianao dia asaina mandefa sora-baventy mandritra ny 15 andro ao amin'ny faritra "Nahita saka" ianao, miaraka amin'ny telefaonanao sao misy mitady azy.
Fahano izy: raha tsy te hihazona na tsy afaka mitazona azy ianao dia azonao omena sakafo sy zava-pisotro foana io eo an-joro voaaro amin'ny hatsiaka, orana ary masoandro mivantana. Hankasitrahany izany.
Ento izy ho any amin'ny castrate: Fantatro tsara fa ny saka mandehandeha dia tokony ho andraikitry ny tanàna ary tokony hamorona fanentanana maimaimpoana sy fanararaotana maimaimpoana matetika kokoa noho izy ireo, fa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mamaha ny olan'ny vahoaka be isika na mifehy antsika: tsirairay . Noho izany, raha zakanao izany ary, ambonin'izany rehetra izany, raha irinao, tena tsara ny hanomezana odiana ny saka, na lahy na vavy. Matetika ny veterinera dia mahazo vidiny manokana raha saka saka mania.
Inona no dikan'ny hoe rehefa miseho eo am-baravaranao ny saka?
Raha mahatsapa ianao indray andro fa manana saka eo am-baravaranao izay tsy hijanona ny famaohana ahy dia mety hihalefaka ny fonao. Afaka mandao ny fonenany mahazatra ny saka ary tonga any an-tranonao noho ny antony maro. Alohan'ny fananana saka vaovao, eZava-dehibe ny mitady hoe inonakarazana kitty inona izy ary raha azo antoka ny fandraisana azy any an-tranony.
Tsy ny saka rehetra miseho eo am-baravaranao no ho biby an-trano vao very. Ny sokajy telo amin'ny saka dia mety: saka saka, saka dia na saka malalaka.
Saka ity saka ity ary mety manana tompony. Jereo raha manana puce izy, na rojo na zavatra afaka mamantatra fa manana tompony izy. Saingy, amin'ny tranga sasany, mety manana microchip ambanin'ny hodiny izy, io dia azo hamarinina amin'ny mpitsabo biby. Na dia mety nanana ny loza aza izy dia nilaozan'ny fianakaviany taloha ary Nahita anao izy satria te ho anisan'ny anao.
Ny saka dia dia tsy an-trano na tsy maotina. Tsy zatra miaina miaraka amin'ny olombelona izy ary noho izany dia afaka manana fihetsika miharihary kokoa. Na avelanao hiditra ao an-tranonao aza izy, dia tsy hifanaraka tsara amin'ny fiainana ao anaty trano.
Ahoana ny fomba hampandehanana ny saka mania
Ity karazan-saka ity dia azo atao milamina, mazàna teraka any anaty alika fehezin'ny olona mitandrina ny sakafony eny ivelany na mety nilaozana mihitsy aza ary tsy maintsy mitady fiainana.
Antony mety hisehoan'ny saka eo am-baravaranao
Ny saka tonga eo am-baravaranao dia mety hidika zavatra maro:
Te hahafanta-javatra:Ny saka dia mpikarokaroka ary misy zavatra manakaiky na ao an-tranonao mety hisarika ny sainy.
Fahazoana: Raha manana sakafo sy rano eo akaikin'ny tranonao izy ireo dia ho eo akaikin'io toerana io foana izy ireo.
fiarovana:Raha noana, mangatsiaka, mangetaheta izy na maniry toerana fialofana fotsiny dia mety manontany anao izy ...
Finoanoam-poana: Misy ireo mihevitra fa rehefa miseho ao an-tranonao "tsy misy antony" ny saka dia mety hidika hoe vintana na loza.
Dingana tokony horaisina rehefa misy saka miseho eo am-baravaranao
Biby sa arabe?
Raha saka mandehandeha, malemy fanahy na tompona izy dia hiditra ao an-tranonao tsy misy olana izany. Ny saka dia dia aleony mijanona any ivelany. Raha tsy te hiditra ny saka dia aza terena fotsiny satria mety ho lasa mahery setra. Aleo ianao mividy sakafo ho azy na mahazo matoky azy alohan'ny hidirany ao an-tranonao.
Zahao ireo famantarana fa manana tompony izy
Jereo raha misy famantarana fa manana tompony io: rojo, puce sns. Ny fanondroana fa an'olona io. Raha manana biby hafa ianao, dia aza avela hiaraka izy ireo mba hialana amin'ny aretina na aretina mety hitranga. Raha heverinao fa tsy manana tompony izany dia ento any amin'ny mpitsabo aretin-tsaina ianao. Raha manana puce izy dia hivoaka ny mombamomba ny tompona ary azonao averina aminy izany.
Ahoana raha tsy hitanao ny tompony?
Raha tsy mahita ny karapanondron'ny tompony ianao dia aza mieritreritra fa tsy an'olon-kafa ilay saka. Alohan'ny handraisanao azy ho anao dia ataovy izay hahitanao ny tompony. Afaka manontany manodidina ny trano ianao na mametraka afisy. Mazava ho azy fa raha misy miantso anao milaza fa azy ny saka dia tsy maintsy asehony anao ny porofo hahitanao fa marina izay lazainy ary tsy fanararaotana ahazo saka sakaiza izany.
Omeo sakafo sy fialofana
Atolory ny saka sakafo, rano ary fialofana mba hahatsapan'izy ireo fa tsara eo akaikinao. Rehefa mahazo toky bebe kokoa izy dia mety te ho anisan'ny fianakavianao. Satria tadidio fa tamin'ity tranga ity dia mbola tsy nifidy azy ianao fa ianao no nofidiny aloha!
Zahao ny aretina ary vaksio ao amin'ny toeram-pitsaboana izy
Raha vantany vao manapa-kevitra ny hitazona ny saka ianao dia avereno any amin'ny mpitsabo biby izy mba hahatratrarana ny vaksiny ary asaivo sterilized na sterilized aza izy raha hitanao fa ilaina izany. Hanome anao ny torolàlana tsara indrindra ho an'ny fikarakaran'izy ireo ny mpitsabo biby raha jerena ny fahasalamany manokana.
Omano ny tranonao
Ankoatra ny fanaovana vaksiny azy sy ny fiahiahiany ny fahasalamany dia tsy maintsy manomana ny tranonao ianao mba hahafaly ny saka vaovao eo akaikinao. Amboary ny fandriany, ny fitoeran'ny fako, sakafo sy rano vaovao ary omeo azy ny fitiavanao rehetra isaky ny mangataka izy.
Manantena aho fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity? .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona no ataoko raha mahita saka eo am-baravaran'ny tranoko aho?
vatosoa??? dia hoy izy:
Tena nanampy ahy izany satria indray alina dia nifanena tamina saka kely iray tao amin'ny faran'ny tranoko aho, natory aho ary ny ampitson'iny dia nanontany ny ray aman-dreniko aho raha afaka mijanona izahay fa tsy navelan'izy ireo aho dia nitady. google izay azoko atao sy manohitra an'io. Izaho no nanome sakafo azy, nikarakara azy, nosafosafoina, niara-nilalao taminy ... ary izao dia tsy manana olana aho, na dia nanomboka teo aza dia hitako fa te ho fialofana ho an'ny biby aho mba hamonjena ny ain'ny karazam-biby rehetra. ??????
Valio ny gem???
Faly be aho fa tena nanampy anao ity lahatsoratra ity 🙂
Maria Victoria Luna dia hoy izy:
Zana-kisary voasary no niditra tao an-tranoko, fa tamin'ny fotoana hafa dia nijanona teo am-baravarankely na teo anoloan'ny varavarana izy. Tsy mitady sakafo izy, manana tompony mihoatra ny iray izy ireo, mpifanolobodirindrina amiko am-pitan'ny arabe. Nanolotra sakafo ho azy aho ary tsy liana izy. Tsy azoko…
Valiny tamin'i María Victoria Luna
Salama Maria Victoria.
Mety hoe orinasa tsotra fotsiny no tadiaviny, na hoe te-hijery manodidina ny tranonao na ny manodidina ianao
Na izany na tsy izany, manoro hevitra aho ny hiresaka amin'ireo mpifanila vodirindrina aminao raha toa ka misy manjo azy ireo.
Misaotra tamin'ny fampahalalana. Te-haneho hevitra fotsiny aho fa toa mety amiko ny safidy famonoana zaza vavy ka tsy misy saka eny an-dalambe, na izany aza ny saka lahy dia teritery ary miady amin'ny saka hafa hiaro ny habaka, ary nisy mpitsabo biby nilaza tamiko fa rehefa nandroso izy ireo dia lasa tony ka tsy miaro tena intsony rehefa miady amin'ny saka hafa ary mety haratra. Mahaliana raha miresaka momba an'io lohahevitra io indraindray ianao Misaotra
Azo antoka. Raha ny marina dia mpitsabo iray no nilaza tamiko izany zavatra izany indray mandeha. Saingy tsy hoe tsy miaro tena izy ireo fa lasa milamina kokoa raha hiteny.
Misaotra betsaka anao naneho hevitra. Azo antoka fa hanampy olona iray izany.